” ကမ္ဘာကျော် မတရားမှုကြီး ” ( သို့ ) ကမ္ဘာက သိအောင် မျက်နှာပျက် ခဲ့ရတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ ရဲ့ တရားစီရင်ရေး – Na Pann San
” ကမ္ဘာကျော် မတရားမှုကြီး ” ( သို့ ) ကမ္ဘာက သိအောင် မျက်နှာပျက် ခဲ့ရတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ ရဲ့ တရားစီရင်ရေး
Na Pann San W | July 31, 2020 | Knowledge | No Comments
တရား စီ ရင် မှု ဆို တာ…
အရက် သောက်နေ တဲ့ မိန်းမတွေ ရဲ့ မျက်နှာတွေ ပြာနှမ်း လာ တယ်…။ ရုတ် တ ရက် ဟုမိခို က “ ဗိုက်နာတယ်.. မူးတယ်…အား..! ကယ်ကြပါ…” ဟုမိခို လဲကျသွား တယ်..။ ပြီးတော့ မိန်းမတွေ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် လဲကျကုန်တယ်…။
“ဝေါ့..အား ! ကယ်ပါ..” မိန်းမတွေ ဟာ သူတို့ ထိုင်နေတဲ့နေရာ မှာတင် ထိုးအန် လိုက်ကြပြီး သတိလစ် လဲကျ ကုန် တယ်…။ မိန်းမတွေကို ရွာထဲက ဆရာဝန်နဲ့ သူနာပြုတွေက အမြန်ဆုံး ရောက်လာပြီး အသက်ကယ်ဖို့ ကြိုးစားကြတယ်..။ မိန်းမ ၁၂ ယောက် ကိုတော့ သူတို့ ကယ်လိုက်နိုင်ကြ တယ်..။ ၅ ယောက်ကတော့ သေသွားပြီ..။
သူတို့တတွေ အရက် ထဲ အဆိပ်ခတ် ခံရတာတဲ့…။ သူတို့က ဂျပန် အမျိုးသမီးတွေပေါ့ ..။ အဲဒီနေ့ က Kuzuo ရွာနဲ့ အိမ်နီးချင်း ရွာတွေ အစည်းအဝေး လုပ်တဲ့နေ့..။ အဲဒီနေ့က သူတို့ တစ်ရွာနဲ့ တစ်ရွာချစ်ကြည်ရေး အသင်း ရဲ့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အသစ် ထပ်ရွေး တယ်..။ ပြီးတော့ အစည်းအဝေးအောင်မြင်တဲ့ အထိမ်းအမှတ်နဲ့ အရက်စသောက်ကြရင်း ဒီလိုကြောက်မက်ဖွယ်ရာ အဖြစ်ဆိုးကြီးဖြစ်ခဲ့ တာပေါ့…။
Kuzuo ရွာကလူတွေဟာ တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် သိပ်ရင်းနှီးပြီး တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက် သိပ်စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ မိသားစုလိုနေကြတဲ့ ရွာငယ်လေးပေါ့…။ ဒီပြဿနာက Kuzuo ရွာတစ်ရွာလုံးကို တုန်လှုပ် ချောက်ချားစေ တယ်။ အဲဒီခေတ် ရွာကလူတွေ ဟာ သူတို့ရွာ ကို သူတို့ သိပ်ဂုဏ်ယူကြတယ်..။ တစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆို ရွာနာမည်မပျက်ဖို့ အဓိကထားကြတဲ့ခေတ်ပေါ့..။ လူသေတာထက် သူတို့ရွာကို ဝိုင်းပယ်ကြမှာ၊ အိမ်နီးချင်းရွာတွေနဲ့ ကုန်ပစ္စည်း အရောင်း အဝယ် မဖြစ်မှာ သိပ်စိုးရိမ်ကြတာမျိုး..။
ဒီ သတင်း ဟာ ဂျပန်ပြည်က အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ ပြည်သူတွေကို အုတ်အော်သောင်းတင်း ဖြစ်စေ တယ်..။ ထောက်လှမ်းရေး ဘက် ကို တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့က ဖိအားပေးတော့တယ်..။
ဂျပန်နိုင်ငံလည်း တောင်ကိုရီးယား လိုပဲ အမှု တစ်ခုဖြစ်ရင် သက်သေရှာ အမှုစုံစ မ်းရတာ ရဲတွေရဲ့တာဝန်၊ နောက်တစ်ဆင့် ရဲတွေက ထောက်လှမ်းရေးတွေ ဆီ တင်ပြရတယ်..။ ထောက်လှမ်းရေး က အမှု ကို ထပ်စစ်ပြီး တရား သူကြီးဆီ တင်တာပေါ့…။ ဒီလိုပြဿနာအကြီးကြီးဖြစ်လာရင် အစိုးရအဖွဲ့က ထောက်လှမ်းရေးကို ဖိအားပေး..။ ထောက်လှမ်းရေးက ရဲတွေကို ဖိအားပေးပြန် တယ်…။
Kuzuo ရွာထဲ ကို ရဲတွေရောက် လာပြီး ရွာသားတွေ ကို စစ်ဆေးတော့တယ်..။
အခင်း ဖြစ်တဲ့နေ့ က ၁၉၆၁ ခုနှစ်မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့.. အဲဒီနေ့က အစည်းအဝေးပြီးတော့ ရွာဓလေ့ထုံးစံအရ အမျိုးသားတွေက ဆန်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဆာကေး (Sake) အရက်ကိုသောက်ရတယ်။ မိန်းကလေးတွေ ကတော့ စပျစ်သီး နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဝိုင်အဖြူ ကို သောက်ကြ ရတယ်။ “ အစည်းအဝေးတက်ကြတဲ့ မိန်းကလေးအယောက်နှစ်ဆယ်ထဲက ဝိုင်သောက်တဲ့သူက ၁၇ ယောက် .. အားလုံးထိုးအန်ကြတာရှင့်…။ ဝိုင်မသောက်တဲ့ ၃ ယောက်ကတော့ ဘာ မှ မဖြစ်ဘူး..”
ရဲတွေ ဟာ လက်ကျန် ပုလင်းကြီးထဲ က ဝိုင်တွေနဲ့ သောက်လက်စ ဝိုင်ခွက်ထဲ က အကျန်တွေ ကိုသိမ်းဆည်းပြီး ဓာတ်ခွဲခန်းပို့လိုက်ကြ တယ်။ ဝိုင်ထဲမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးမှာ သုံးရတဲ့ ပိုးသတ်ဆေး (pesticide) တွေရောနှောနေ တာ တွေ့ ရတယ်…။
Kuzuo ရွာဟာ မြို့နဲ့ ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့နေရာ က တောင်တန်းတွေကြားက ကျေးရွာ တစ်ရွာဖြစ်တယ်..။ အဲဒီ ပိုးသတ်ဆေးတွေကို ဝယ်မယ်ဆိုရင် တကူးတက မြို့တက်ပြီး ဝယ်မှရတာမို့ အာဏာပိုင်တွေက ဒါဟာ တမင်ရည်ရွယ် တဲ့ အမှုလို့ တစ်ရွာလုံးကို စွပ်စွဲလိုက်တော့ တယ်..။ ဒါကြောင့် Kuzuo ရွာကလူတွေ ပိုပြီး ဆတ်ဆတ်ထိမခံ ဖြစ်သွားကြတာပေါ့..။
အဲဒီဝိုင်နဲ့ အရက်တွေ ကို ဒေသခံရွာ အကြီး အကဲအိမ်ကနေ အစည်းအဝေးခန်းမကို သယ်သွားဖို့ တာဝန်ကျခဲ့တဲ့ ယောက်ျား၃ ယောက်ရှိတယ်..။ သူတို့သယ်လာပြီး အစည်းအဝေးခန်းမရောက် တော့ ၅ နာရီ ၂၀ …။ လူတွေ စ ရောက် လာတော့ ၅ နာရီ ၃၀ မိနစ်..။ အဲဒီ ၁၀ မိနစ်မှာ တစ်စုံ တစ်ယောက်က အရက်ထဲ ပိုးသတ်ဆေးတွေ ထည့်လိုက်တာပေါ့..။ အရက်သယ် ဖို့ တာဝန်ယူသူ ၃ ယောက် ကို ရဲတွေကခေါ်စစ်တော့ တယ်…။
သူတို့ ၃ ယောက်အထဲ က လယ်သမား မာဆရု အိုခုနိရှိ (Masaru Okunishi) ကို တရားခံပါလို့ ရွာကလူတစ်ယောက် နှစ်ယောက် က စပြီးစွပ်စွဲကြတော့ တာပဲ..။ အဲဒီပြဿနာမဖြစ်ခင် ကတည်းက အိုခုနိရှိ က မိန်းမရှိလျက်သား နဲ့ အခြားမိန်းမနဲ့ရှုပ်တယ်လို့ တီးတိုး သတင်းထွက်နေသူမို့ ရွာမှာ သူ့ကိုသိပ်ကြည့် မရတဲ့သူတွေ ရှိနေတယ်..။
နောက်တစ်နေ့မှာ ပဲ ရွာထဲကလူတွေက လယ်သမား အိုခုနိရှိဟာ လူသတ်သမား ပါဆိုပြီး တစ်ရွာလုံး အတိအကျ ဒေါသတကြီး ပြောကြတော့ တာပဲ..။ ဒီဝိုင်ပုလင်းကို စဖွင့်တဲ့သူကလည်း အိုခုနိရှိ မဟုတ်ဘူး..။ အသစ်ရွေးခံရ တဲ့ ချစ်ကြည်ရေး အသင်းရဲ့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ..။ အိုခုနိရှိက ဆာကေး အရက် ပုလင်းကို ဖွင့်တာဖြစ်တယ်..။ အိုခုနိရှိ က အဆိပ်ထည့်တယ်ဆိုတာ ဘာမှ သက်သေမရှိ.. ရွာသားတွေ ရဲ့ သံသယနဲ့ အတင်းစကား၊ ကောလာဟလတွေဟာ ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် ပျံ့နှံ့ ကုန်တယ်..။
ရဲတွေဟာ ရွာသားတွေ ရဲ့ စွပ်စွဲချက်၊ အထက်က ထောက်လှမ်းရေးတွေ ရဲ့ ဖိအားကြောင့် အိုခုနိရှိ ကို ၃ ရက် လုံးလုံး ပြင်းပြင်းထန်ထန် နှိပ်စက် စစ်ဆေးမေးမြန်းတော့ တယ်..။ အိုခုနိရှိဟာ နှိပ်စက်တဲ့ ဒဏ်ကို ဆက်မခံနိုင်တော့ ဘူး..။
၁၉၆၁ ဧပြီ ၂ ရက်.. အိုခုနိရှိ ကို အချုပ်ချ လိုက်တယ်…။
“သေသွားတဲ့သူတွေထဲ မှာ ကျွန်တော့် မိန်းမရော… ကျွန်တော့် ရည်းစားရော နှစ်ယောက်လုံး ပါတယ်…။ မိန်းမ နှစ်ယောက်ကြား ဗျာများပြီး ဘာလုပ် လို့ လုပ်ရမှန်းမသိ… အရက်ထဲ အဆိပ်ခတ်သတ်ရင်း နဲ့ တခြား မဆိုင်တဲ့မိန်းမတွေ ပါ အဆိပ်မိကုန် ပါတယ်။”
မာဆရု အိုခုနိရှိ (Masaru Okunishi) ဆိုသူက အဲဒီလို ဝန်ခံလိုက်ပြီ လို့ သတင်းတွေထဲ ပါလာတယ်..။ အဲဒီ အမှုဟာ အဲဒီလို လျင်လျင်မြန်မြန် အဆုံး သတ်သွားတယ်..။ အိုခုနိရှိ မိန်းမလည်းသေ..။ အိုခုနိရှိ ကလေးတွေ ဆို အမေကသေ၊ အဖေက ထောင်ကျ..။ အဘိုးအဘွား၊ ဆွေမျိုးတွေကို ရွာထဲက လူတွေ က ဝိုင်းရိုက်…။ ဘဝတွေပျက်တော့တာပဲ..။
ထောက်လှမ်းရေးဆီ ရဲတွေက ပို့လိုက်တဲ့ အစီရင်ခံစာ ရောက်လာ တယ်..။ အိုခုနိရှိက ကိုယ့်အသိစိတ် နဲ့ကိုယ်တိုင် လာပြီး ဝန်ခံတာ တဲ့…။ သက်သေကရော..? သက်သေကတော့ ရေရေရာရာ သိပ်မ ရှိဘူးတဲ့။
ထူးခြားတာက ရွာသားတွေ ဟာ လိုတာ ထက်ပိုပြီး ဒေါသကြီးနေကြတယ်..။ အိုခုနိရှိ ကို သေဒဏ်ပေး ဖို့ တောင်းဆိုကြပါလေရော…။ တကယ့် လူသတ်သမားက ရွာသားတွေကို ဆူအောင်လုပ်တာ လည်း ပါမှာပေါ့..။
ဒါပေမဲ့ သူတို့ အိုခုနိရှိကို ဒီရာဇ၀တ်မှု နဲ့ ဆက်စပ်တယ် လို့ ပြောရအောင် ရုပ်ဝတ္ထု သက်သေ အထောက်အထား ဒါမှမဟုတ် မျက်မြင်သက်သေ တစ်ခုဆို တစ်ခုမှမရှိ..။ အတင်းကနေ ကောလာဟလ… ကောလာ ဟလကနေ သတင်းဖြစ်လာတဲ့ လုပ်ကြံ ဇာတ်လမ်း သက်သက်…။
အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေ့က ဝိုင် အဆို့မှာ သွားနဲ့ကိုက် ထုတ်ထားတဲ့ သွားရာ တစ်ရာတော့ ရှိ တယ်..။ အဲဒီတုန်း က DNA test လည်းမပေါ်သေးတော့ ဘယ်သူ့ သွားရာ ဆိုတာ သေချာ မသိနိုင်..။
အိုခုနိရှိ ဟာ တရားရုံး မှာ “ ကျွန်တော် လူမသတ် ပါဘူး..။ မတရား မလုပ်ကြပါနဲ့ ခင်ဗျာ.. ကြောက်လို့ ဝန်ခံ လိုက်တာပါ” လို့ ငိုယိုတောင်းပန်နေရှာ တယ်…။ ရွာသားတွေကလည်း ဒေါသ တကြီး စွပ်စွဲကြပေါ့..။
အိုခုနိရှိ ဟာ အခင်းဖြစ်ပွား တဲ့နေ့ မတိုင်ခင် ၆ လလောက်တုန်းက မြို့တက်ပြီးတော့ ပိုးသတ်ဆေးဝယ်တယ်….။ အဲဒီပိုးသတ်ဆေးနဲ့ဝိုင်ထဲကပိုးသတ်ဆေးနဲ့တူတူပဲဆိုပြီးတော့ သက်သေပြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အိုခုနိရှိက အဆိပ်ခတ်တယ် ဆိုတာ သက်သေ အထောက်အထား မရှိတာကြောင့် အိုခုနိရှိဘက် က ရှေ့နေနိုင် တယ်…။ ဝိုင်ပုလင်း ဆို့ပေါ်က သွားရာကို ပညာရှင် ၆ ယောက်ကိုဆုံးဖြတ်ခိုင်း တာ အိုခုနိရှိ ရဲ့သွားရာလို့ ထောက်ခံ သူက ၃ ယောက်…။ အိုခုနိရှိရဲ့သွားရာ မဟုတ်ဘူးလို့ငြင်း သူက ၃ ယောက်…။
၁၉၆၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ…။ ပထမဦးဆုံး တရားရုံး က “အပြစ် မရှိ တရားသေ” လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တ ယ်…။ အိုခုနိရှိ ပျော်နေခဲ့သေး တယ်…။ ဒီလို အဖြေကိုရ ဖို့ အိုခုနိရှိရှေ့နေကြီးက ကြိုးစား ရတာ ၄ နှစ်နီးပါး..။
ရွာသားတွေ က လူသတ်ကောင်ရှာမတွေ့ရင် ရဲတွေ ရွာထဲကိုထပ်လာ၊ ဇာတ်လမ်းရှည်ပြီး ရွာနာမည်ပျက် မှာ ကြောက်တယ်..။ ရဲတွေက အိုခုနိရှိ ကို နှိပ်စက်ပြီး အတင်းအကျပ် ဝန်ခံခိုင်းတာကို ပြဿနာတက် မှာကြောက် တယ်..။ ထောက်လှမ်းရေးဘက် ကလည်း ဒါ ရဲတွေ နှိပ်စက်ပြီး အတင်းဝန်ခံ ခိုင်းခဲ့တာ ရိပ်မိနေပြီ..။ ဒါပေမဲ့ စပြီးသား အလုပ်မို့ သူတို့ ရဲ့ အမှား ကို ဂျပန်ပြည်သူတွေ ရှေ့မှာ ဝန်မခံချင်..။ ဒါကြောင့် အိုခုနိရှိ တရားခံ မဟုတ်ရင် တရားခံဘယ်သူလဲ ဆိုတာ သူတို့အားလုံး မတွေးချင်ကြ…။ သူတို့ အားလုံးဟာ အိုခုနိရှိ ကိုသာတရားခံ လို့ အတည်ပြုဖို့ ကြိုးစားကြတော့တာပဲ..။
ထောက်လှမ်းရေးတွေက သက်သေ ထပ်ရှာပြီးတော့ အမှုထပ်ဖွင့် တယ်။
အိုခုနိရှိ ထောင်ထဲကနေ အမှုကို ဆက်ပြီး ရင်ဆိုင်ရတယ်..။ အဲဒီလို အိုခုနိရှိ ထောင်ထဲနေရတဲ့ အချိန် ကျန်ခဲ့တဲ့မိသားစုက ရွာမှာ အနှိမ်ခံ၊ အပယ်ခံရတာ.. ရစရာကိုမရှိ…။ နောက်ဆုံး ရိုက်နှက်ပြီး အိုခုနိရှိ မိသားစု ဆွေမျိုးတွေ အကုန်လုံးကို ရွာထဲက မောင်းထုတ် လိုက်ကြတယ်..။
Nabari မြို့ မှာ အထက်တန်းကျောင်းသွား တက်နေတဲ့ သူ့သားလည်း လူသတ်သမား ရဲ့သားဆိုပြီး ကျောင်းမှာ အရိုက်ခံရ၊ ကျောင်းအထုတ်ခံရ…။
“မတရားဘူး.. သူ တို့ ကျွန်တော့် ကလေးတွေ နဲ့ ကျွန်တော့်ကို ခွဲပစ်လိုက်ကြတာ “ အိုခုနိရှိဟာ ရွာသားတွေ ကို အလွန်စိတ်နာသွားတယ်..။
“ကျွန်တော့် ကလေးတွေအ တွက် ကျွန်တော် လုပ်ပေးနိုင်တာ တစ်ခုတည်း ရှိတယ်.. ကျွန်တော် အပြစ်မရှိတာ သက်သေပြဖို့ပဲ…။ ရွာသားတွေ ရဲ့ မတရားမှု၊ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ မတရားမှုကို တစ်နေ့နေ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက သိစေရမယ် ဆိုတာပဲ..”
အမှုက နောက်ထပ် ၄ နှစ်ကြာသွားတယ်..။၁၉၆၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ.. သက်သေ အသစ် ဆို ဘာမှမရှိ…။ ပထမ တရားရုံးတုန်းက အိုခုနိရှိ ရဲ့သွားရာလို့ ထောက်ခံသူ ၃ ယောက်ထဲက တစ်ယောက်က ဂျပန်နိုင်ငံက နာမည်ကြီး ပါမောက္ခဖြစ်တယ်..။ သူတင်ပြတာ ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိတယ် ဆိုပြီး တရားသူကြီးက ထောက်လှမ်းရေး ဘက်က အနိုင်ပေးလိုက်တယ်…။
၁၉၆၉ ခုနှစ်.. နောက်ထပ် တရားခွင် မှာ လယ်သမား အိုခုနိရှိ “ သေဒဏ်”….။ အိုခုနိရှိ အသက် ၃၅ နှစ်..။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အလွန် ဝေးလံခေါင်သီသောတောင်တန်းတွေကြား က အရပ်မြင့်မြင့် ရုပ်ချောချော … Kuzuo ရွာသားလေးတစ်ယောက် ရဲ့ ရင်နင့်ဖွယ်ဖြစ်ရပ်ပေါ့..။
အိုခုနိရှိဟာ Nabari ဘူတာရုံ မှာ ၁၉၄၂ ကစပြီး အလုပ်လု ပ်ခဲ့တယ် …..။ ၁၉၄၄ မှ ၁၉၄၅ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်း မှာတော့ စစ်သားဝင် လုပ်ခဲ့သေးတယ်…။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး ၁၉၄၇ ခုနှစ်မှာ Chieko ဆိုတဲ့ Nabari ဘူတာရုံမှာ အလုပ် အတူတူလုပ်တဲ့ အမျိုးသမီး နဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး သားတစ်ယောက် ၊ သမီးတစ်ယောက် ရခဲ့တယ်..။ အဲဒီနောက်ပိုင်း အိုခုနိရှိဟာ လယ်သမား အလုပ်လုပ်ပြီး မိသားစုနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနေတဲ့ သာမန် အညတရ တစ်ယောက်..။ မိန်းမ ရှိလျက်သားနဲ့ အခြားမိန်းမနဲ့ မရှုပ်မရှင်းဖြစ်နေခဲ့တာတော့ အမှန်ပဲလို့ သူ ဝန်ခံ ခဲ့တယ်..။
၁၉၇၂ မှာ အိုခုနိရှိ သေဒဏ်ဆိုတာ အမြင့်ဆုံး တရားရုံး က အတည်ပြု လိုက်တယ်..။ အိုခုနိရှိက ၄ ကြိမ်ဆက်တိုက် ထပ်ပြီး အယူခံဆက်ဝင်တယ်…။ တရားရုံးက အမြဲပယ်ချတယ်..။
၁၉၇၃ ခုနှစ်.. အိုခုနိရှိ အဲဒီလို မတရားသဖြင့် အနိုင်ကျ င့်တာ ခံနေ ရတာမို့ Japan Federation of Bar Associations (JFBA) က ‘Nabari Case Committee’ ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာပေါ့..။ အိုခုနိရှိ ရဲ့ ၅ ကြိမ်မြောက် အယူခံဝင်ဖို့ ကူညီပေးကြ တယ်..။ တရားရုံး က ထပ်ပြီး ပယ်ချတယ်..။
၁၉၉၇ ခုနှစ်.. Professor Habu က လူတစ်ယောက် ဝိုင်ပုလင်းဆို့ကို ပါးစပ်နဲ့ ၃ ကြိမ် ကိုက်ဖွင့်စေပြီး အဲဒီလို ကိုက်ဖွင့်တဲ့ သွားရာတွေဟာ အခြေအနေ အမျိုးမျိုးကို မူတည်ပြီး မတူညီနိုင်ဘူး ဆိုတာ သက်သေပြ တယ်..။ ဒါကြောင့် အိုခုနိရှိ ရဲ့ သွားရာ ဆိုတဲ့ သက်သေ ဟာ ခိုင်လုံမှု မရှိလို့ အိုခုနိရှိရဲ့ အမှုကို အယူခံ ထပ်ဝင်တယ်..။ ဒါ ၆ ကြိမ်မြောက်ပေါ့..။ တရားရုံးက ပယ်ချပြန် တယ်..။
၂၀၀၅ ခုနှစ်.. သိပ္ပံပညာတွေ တိုးတက်လာ တယ်..။ စမ်းသပ်ချက်တွေ အရ အမျိုးသမီးတွေသောက် ခဲ့တဲ့ စပျစ်ဝိုင်ထဲက ပိုးသတ်ဆေး နဲ့ အိုခုနိရှိ ဝယ်ခဲ့တဲ့ ပိုးသတ်ဆေးဟာ လုံးဝမတူဘူး ဆိုတဲ့ အဖြေထွက်လာတယ်..။ နောက်တစ်ခုက အိုခုနိရှိ ဝယ်တဲ့ ပိုးသတ်ဆေးက အနီရောင် နဲ့ အဖြူအနှစ်ရောင် နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်…။ ဝိုင်အကြည်ထဲကို ထည့်ရင် အသိသာကြီး..။ ဒါကို ပထမတရားရုံးတုန်းက ဘယ်သူမှ သတိမထားမိခဲ့ကြ…။ အိုခုနိရှိက ဝမ်းသာအားရ ၇ ကြိမ်မြောက် အယူခံဝင်ပြန် တယ်..။ ဒီတစ်ခါတော့ ဂျပန် တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့က တရားပြန်စီရင်ပေးမယ်လို့ အမိန့်ချလိုက် တယ်..။ အသက် ၈၀ နီးပါး အဘိုးကြီး အိုခုနိရှိ အလွန် ဝမ်းသာသွားတယ်…။
ဒါပေမဲ့ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ ထောက်လှမ်းရေးတွေဘက် က အဲဒီအမိန့် ကို ပြန်ရုပ်သိမ်း ဖို့ စာတင်ပြန်တယ်..။ နောက်ဆုံးအချိန်အထိ အမှားကို ဝန်မခံတဲ့သူတွေ..။ သိပ်ကြောက်ဖို့ကောင်း ခဲ့တယ်..။
ကျောထောက်နောက်ခံ မရှိတဲ့ အမှန်တရားဟာ မာနကြီး ပညာတတ်သူတွေ ရဲ့ လှည့်ကွက်မှာ အလူးအလဲပေါ့..။
“အမှုပြန်စစ်ဖို့ အတွက် ထောင်ထဲကနေ ရွာက အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာ သွားရတယ်..။ ရွာထဲကို ဝင်လိုက်တိုင်း ကျွန်တော့်ရဲ့သားနဲ့ သမီးလေးက“ အဖေရေ..”လို့အော်ပြီးတော့ အော်ငိုလိုက်တဲ့အသံ ကို ကျွန်တော်အမြဲကြားနေ မိတယ်ဗျာ..!”
ဒီလိုနဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလ ကိုရောက်လာတယ်..။ “The Center on Wrongful Convictions at Northwestern University School of Law” ဆိုတဲ့ အမေရိကန် U.S. Law School Clinic တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းက အိုခုနိရှိ အမှုကို ပြန်လည်စစ်ဆေး ဖို့ ကူညီငြင်းခုံပေးတော့ အိုခုနိရှိ အသက် ၈၁ နှစ်ရှိနေပြီ..။
အိုခုနိရှိကို သေဒဏ်ချလိုက်တဲ့ တရားရုံးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ဟာ မှားယွင်း တဲ့ ၀န်ခံချက်တွေ နဲ့ မှားယွင်းစွာနားလည်မှုအပေါ် အခြေခံထားတာ မို့ အမှုပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ ဂျပန်ဗဟိုတရားရုံးချုပ်ကို တောင်းဆို လိုက်တယ်..။ ဒါကို ဂျပန်ပြည် က စဉ်းစားမယ် ဆိုပြီးပြော ဆိုခဲ့တယ်..။
အိုခုနိရှိ တစ်ယောက် အားတက်ရပြန် တယ်…။ အိုခုနိရှိ ရှေ့နေက ကူညီပြီး အမှု ဟိုးအစကနေ အဆုံးအထိ အသစ်ပြန်ရေးပြီး ပြန်လျှောက်တယ်…။
ဒီနေ့အထိ တင်ထားဆဲဖြ စ်တယ်..။
၂၀၁၀ မှာ အိုခုနိရှိ ရဲ့ သားက ရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန် ခဲ့တယ်..။ အိုခုနိရှိဟာ မိသားစုနဲ့ အတူပြန်နေဖို့ မျှော်လင့်ထားသမျှ သားက သူ့ ကို အရင်ခွဲခွာသွားလေပြီ..။
UN Human Rights Committee က အိုခုနိရှိ ကို ကူညီခဲ့ကြပေမဲ့ မာနကြီး တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက ထောက်လှမ်းရေးတွေဟာ ဂျပန်နိုင်ငံ တရားစီရင်ရေးဘက် မှာ ဩဇာညောင်းလွန်းလှတယ်..။
The Asian Human Rights Commission (AHRC) အာရှလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကလည်း အသက် (၈၁) နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အိုခုနိရှိ နဲ့ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်တွေကို စုဆောင်းပြီး အမှုပြန်ဖွင့်ဖို့ ကူညီခဲ့တယ်။
ဘယ် အချိန်၊ ဘယ်နေ့ တံခါးလာခေါက်ပြီး လျှပ်စစ်ခုံပေါ် ထိုင်ရမလဲဆိုတဲ့ အတွေး နဲ့ အိုခုနိရှိဟာ တစ်ယောက်ခန်းထောင်ထဲ မှာ ကြောက်လန့်ပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ ..။ နေ့တိုင်းဟာ သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်လာနိုင် တယ်လေ…။ ဂျပန်နိုင်ငံ မှာ သေဒဏ်ချမှတ်ခံရတဲ့သူတွေ ဟာ သူတို့ သေရမယ့် အချိန်ကို နာရီပိုင်းလောက် ပဲ ကြိုသိ ရတာလေ..။
အယူခံလေး ဝင်ပြီး မျှော်လင့်ချက်ရှိလာလိုက်… ထောက်လှမ်းရေးဘက်က ပယ်ချလိုက်… ဘဝမှာ ရှင်လိုက်၊ သေလိုက် ဖြစ်ခဲ့ရတာ အကြိမ်ကြီမ်…။ ဒါနဲ့ပဲ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ၊ အိုခုနိရှိ ဟာ ထောင်ထဲ မှာပဲ နမိုးနီးယား နဲ့ သေ ခဲ့ရတယ်..။ အိုခုနိရှိ အသက် ၈၉ နှစ်အရွယ်..။ မသေခင်အထိ သူပြောခဲ့တဲ့ စကားက “ ကျွန်တော် လူမသတ်ပါဘူး..။ မတရားမလုပ်ကြပါနဲ့ ခင်ဗျာ..” တဲ့
အိုခုနိရှိ ရဲ့ အမှုဟာ ဂျပန် ရာဇ၀တ်မှု တရားစီရင်ရေးစနစ် ရဲ့ တလွဲမာန ကိုပြတယ်…။ အိုခုနိရှိ နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံရေး တရားစီရင်မှုဟာ ကမ္ဘာက သိအောင် မျက်နှာပျက်ခဲ့ရတာပေါ့…။ ဒီနေ့အထိ ဂျပန်ပြည်သူတွေ ကြား မှာ အကြီးမားဆုံး အငြင်းပွားစရာ ပဋိပက္ခ တစ်ခု အဖြစ်ရှိနေဆဲ..။
ဂျပန်ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၃၆ မှာ.. “ အပြစ်ကင်းစင် သည်ဟု ယူဆရခြင်း ဥပဒေသ ” ကိုပြဌာန်းထားပေမဲ့ စာအုပ်ထဲမှာပဲ ရှိခဲ့တယ်..။ အဲဒီ ဥပဒေမှာ “ တရားခံတစ်ဦးသည် မှုခင်းဆိုင်ရာ အချက် အလက် ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု ၌ အမှားအယွင်းတ စ်ခုခုနှင့် ပတ်သက်လျှင် အယူခံဝင်ခွင့် ရှိသည်။” တဲ့..။
လက်တွေ့ မှာတော့ ဂျပန်နိုင်ငံ ရဲ့ ဩဇာအာဏာရှိပြီး မာနကြီး တဲ့ ထောက်လှမ်းရေးတွေဟာ စကား ကို ပြန်ပြင်ပြောဖို့ ဆိုတာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်သလောက်..။
ထောင်ထဲ မှာ အသက်သေသွားရရှာ တဲ့ အိုခုနိရှိ ဟာ အပြစ်မရှိသူ တစ်ယောက်ဆိုတာ ကို သက်သေပြဖို့ အိုခုနိ ရှိရဲ့ သမီး နဲ့ မြေး မြစ်တွေက ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်နေဆဲဖြစ် ပါတယ်..။
တစ်နေ့နေ့ မှာ အမှန်တရားကို ပြသခွင့်ရမယ် လို့ ယုံကြည်မှု အပြည့် နဲ့ပေါ့..။
အရကျသောကျနေ တဲ့ မိနျးမတှေ ရဲ့ မကျြနှာတှေ ပွာနှမျး လာတယျ…။ ရုတျတရကျ ဟုမိခို က “ ဗိုကျနာတယျ.. မူးတယျ…အား..! ကယျကွပါ…” ဟုမိခို လဲကသြှား တယျ..။ ပွီးတော့ မိနျးမတှေ တဈယောကျပွီး တဈယောကျ လဲကကြုနျတယျ…။
“ဝေါ့..အား ! ကယျပါ..” မိနျးမတှေ ဟာ သူတို့ ထိုငျနတေဲ့နရော မှာတငျ ထိုးအနျ လိုကျကွပွီး သတိလဈ လဲကြ ကုနျ တယျ…။ မိနျးမတှကေို ရှာထဲက ဆရာဝနျနဲ့ သူနာပွုတှကေ အမွနျဆုံး ရောကျလာပွီး အသကျကယျဖို့ ကွိုးစားကွတယျ..။ မိနျးမ ၁၂ ယောကျ ကိုတော့ သူတို့ ကယျလိုကျနိုငျကွ တယျ..။ ၅ ယောကျကတော့ သသှေားပွီ..။
သူတို့တတှေ အရကျ ထဲ အဆိပျခတျ ခံရတာတဲ့…။ သူတို့က ဂပြနျ အမြိုးသမီးတှပေေါ့ ..။ အဲဒီနေ့ က Kuzuo ရှာနဲ့ အိမျနီးခငျြး ရှာတှေ အစညျးအဝေး လုပျတဲ့နေ့..။ အဲဒီနကေ့ သူတို့ တဈရှာနဲ့ တဈရှာခဈြကွညျရေး အသငျး ရဲ့ အဖှဲ့ခေါငျးဆောငျ အသဈ ထပျရှေး တယျ..။ ပွီးတော့ အစညျးအဝေးအောငျမွငျတဲ့ အထိမျးအမှတျနဲ့ အရကျစသောကျကွရငျး ဒီလိုကွောကျမကျဖှယျရာ အဖွဈဆိုးကွီးဖွဈခဲ့ တာပေါ့…။
Kuzuo ရှာကလူတှဟော တဈယောကျ နဲ့ တဈယောကျ သိပျရငျးနှီးပွီး တဈယောကျအကွောငျးတဈယောကျ သိပျစိတျဝငျစားကွတဲ့ မိသားစုလိုနကွေတဲ့ ရှာငယျလေးပေါ့…။ ဒီပွဿနာက Kuzuo ရှာတဈရှာလုံးကို တုနျလှုပျ ခြောကျခြားစေ တယျ။ အဲဒီခတျေ ရှာကလူတှေ ဟာ သူတို့ရှာ ကို သူတို့ သိပျဂုဏျယူကွတယျ..။ တဈခုခုဖွဈပွီဆို ရှာနာမညျမပကျြဖို့ အဓိကထားကွတဲ့ခတျေပေါ့..။ လူသတောထကျ သူတို့ရှာကို ဝိုငျးပယျကွမှာ၊ အိမျနီးခငျြးရှာတှနေဲ့ ကုနျပစ်စညျး အရောငျး အဝယျ မဖွဈမှာ သိပျစိုးရိမျကွတာမြိုး..။
ဒီ သတငျး ဟာ ဂပြနျပွညျက အစိုးရအဖှဲ့နဲ့ ပွညျသူတှကေို အုတျအျောသောငျးတငျး ဖွဈစေ တယျ..။ ထောကျလှမျးရေး ဘကျ ကို တရားစီရငျရေးအဖှဲ့က ဖိအားပေးတော့တယျ..။
ဂပြနျနိုငျငံလညျး တောငျကိုရီးယား လိုပဲ အမှု တဈခုဖွဈရငျ သကျသရှော အမှုစုံစ မျးရတာ ရဲတှရေဲ့တာဝနျ၊ နောကျတဈဆငျ့ ရဲတှကေ ထောကျလှမျးရေးတှေ ဆီ တငျပွရတယျ..။ ထောကျလှမျးရေး က အမှု ကို ထပျစဈပွီး တရား သူကွီးဆီ တငျတာပေါ့…။ ဒီလိုပွဿနာအကွီးကွီးဖွဈလာရငျ အစိုးရအဖှဲ့က ထောကျလှမျးရေးကို ဖိအားပေး..။ ထောကျလှမျးရေးက ရဲတှကေို ဖိအားပေးပွနျ တယျ…။
Kuzuo ရှာထဲ ကို ရဲတှရေောကျ လာပွီး ရှာသားတှေ ကို စဈဆေးတော့တယျ..။
အခငျး ဖွဈတဲ့နေ့ က ၁၉၆၁ ခုနှဈမတျလ ၂၈ ရကျနေ့.. အဲဒီနကေ့ အစညျးအဝေးပွီးတော့ ရှာဓလထေုံ့းစံအရ အမြိုးသားတှကေ ဆနျနဲ့ လုပျထားတဲ့ ဆာကေး (Sake) အရကျကိုသောကျရတယျ။ မိနျးကလေးတှေ ကတော့ စပဈြသီး နဲ့ လုပျထားတဲ့ ဝိုငျအဖွူ ကို သောကျကွ ရတယျ။ “ အစညျးအဝေးတကျကွတဲ့ မိနျးကလေးအယောကျနှဈဆယျထဲက ဝိုငျသောကျတဲ့သူက ၁၇ ယောကျ .. အားလုံးထိုးအနျကွတာရှငျ့…။ ဝိုငျမသောကျတဲ့ ၃ ယောကျကတော့ ဘာ မှ မဖွဈဘူး..”
ရဲတှေ ဟာ လကျကနျြ ပုလငျးကွီးထဲ က ဝိုငျတှနေဲ့ သောကျလကျစ ဝိုငျခှကျထဲ က အကနျြတှေ ကိုသိမျးဆညျးပွီး ဓာတျခှဲခနျးပို့လိုကျကွ တယျ။ ဝိုငျထဲမှာ လယျယာစိုကျပြိုးရေးမှာ သုံးရတဲ့ ပိုးသတျဆေး (pesticide) တှရေောနှောနေ တာ တှေ့ ရတယျ…။
Kuzuo ရှာဟာ မွို့နဲ့ ဝေးလံခေါငျဖြားတဲ့နရော က တောငျတနျးတှကွေားက ကြေးရှာ တဈရှာဖွဈတယျ..။ အဲဒီ ပိုးသတျဆေးတှကေို ဝယျမယျဆိုရငျ တကူးတက မွို့တကျပွီး ဝယျမှရတာမို့ အာဏာပိုငျတှကေ ဒါဟာ တမငျရညျရှယျ တဲ့ အမှုလို့ တဈရှာလုံးကို စှပျစှဲလိုကျတော့ တယျ..။ ဒါကွောငျ့ Kuzuo ရှာကလူတှေ ပိုပွီး ဆတျဆတျထိမခံ ဖွဈသှားကွတာပေါ့..။
အဲဒီဝိုငျနဲ့ အရကျတှေ ကို ဒသေခံရှာ အကွီး အကဲအိမျကနေ အစညျးအဝေးခနျးမကို သယျသှားဖို့ တာဝနျကခြဲ့တဲ့ ယောကျြား၃ ယောကျရှိတယျ..။ သူတို့သယျလာပွီး အစညျးအဝေးခနျးမရောကျ တော့ ၅ နာရီ ၂၀ …။ လူတှေ စ ရောကျ လာတော့ ၅ နာရီ ၃၀ မိနဈ..။ အဲဒီ ၁၀ မိနဈမှာ တဈစုံ တဈယောကျက အရကျထဲ ပိုးသတျဆေးတှေ ထညျ့လိုကျတာပေါ့..။ အရကျသယျ ဖို့ တာဝနျယူသူ ၃ ယောကျ ကို ရဲတှကေချေါစဈတော့ တယျ…။
သူတို့ ၃ ယောကျအထဲ က လယျသမား မာဆရု အိုခုနိရှိ (Masaru Okunishi) ကို တရားခံပါလို့ ရှာကလူတဈယောကျ နှဈယောကျ က စပွီးစှပျစှဲကွတော့ တာပဲ..။ အဲဒီပွဿနာမဖွဈခငျ ကတညျးက အိုခုနိရှိ က မိနျးမရှိလကျြသား နဲ့ အခွားမိနျးမနဲ့ရှုပျတယျလို့ တီးတိုး သတငျးထှကျနသေူမို့ ရှာမှာ သူ့ကိုသိပျကွညျ့ မရတဲ့သူတှေ ရှိနတေယျ..။
နောကျတဈနမှေ့ာ ပဲ ရှာထဲကလူတှကေ လယျသမား အိုခုနိရှိဟာ လူသတျသမား ပါဆိုပွီး တဈရှာလုံး အတိအကြ ဒေါသတကွီး ပွောကွတော့ တာပဲ..။ ဒီဝိုငျပုလငျးကို စဖှငျ့တဲ့သူကလညျး အိုခုနိရှိ မဟုတျဘူး..။ အသဈရှေးခံရ တဲ့ ခဈြကွညျရေး အသငျးရဲ့ အဖှဲ့ခေါငျးဆောငျ ..။ အိုခုနိရှိက ဆာကေး အရကျ ပုလငျးကို ဖှငျ့တာဖွဈတယျ..။ အိုခုနိရှိ က အဆိပျထညျ့တယျဆိုတာ ဘာမှ သကျသမေရှိ.. ရှာသားတှေ ရဲ့ သံသယနဲ့ အတငျးစကား၊ ကောလာဟလတှဟော ကွောကျစရာကောငျးလောကျအောငျ ပြံ့နှံ့ ကုနျတယျ..။
ရဲတှဟော ရှာသားတှေ ရဲ့ စှပျစှဲခကျြ၊ အထကျက ထောကျလှမျးရေးတှေ ရဲ့ ဖိအားကွောငျ့ အိုခုနိရှိ ကို ၃ ရကျ လုံးလုံး ပွငျးပွငျးထနျထနျ နှိပျစကျ စဈဆေးမေးမွနျးတော့ တယျ..။ အိုခုနိရှိဟာ နှိပျစကျတဲ့ ဒဏျကို ဆကျမခံနိုငျတော့ ဘူး..။
၁၉၆၁ ဧပွီ ၂ ရကျ.. အိုခုနိရှိ ကို အခြုပျခြ လိုကျတယျ…။
“သသှေားတဲ့သူတှထေဲ မှာ ကြှနျတေျာ့ မိနျးမရော… ကြှနျတေျာ့ ရညျးစားရော နှဈယောကျလုံး ပါတယျ…။ မိနျးမ နှဈယောကျကွား ဗြာမြားပွီး ဘာလုပျ လို့ လုပျရမှနျးမသိ… အရကျထဲ အဆိပျခတျသတျရငျး နဲ့ တခွား မဆိုငျတဲ့မိနျးမတှေ ပါ အဆိပျမိကုနျ ပါတယျ။”
မာဆရု အိုခုနိရှိ (Masaru Okunishi) ဆိုသူက အဲဒီလို ဝနျခံလိုကျပွီ လို့ သတငျးတှထေဲ ပါလာတယျ..။ အဲဒီ အမှုဟာ အဲဒီလို လငျြလငျြမွနျမွနျ အဆုံး သတျသှားတယျ..။ အိုခုနိရှိ မိနျးမလညျးသေ..။ အိုခုနိရှိ ကလေးတှေ ဆို အမကေသေ၊ အဖကေ ထောငျကြ..။ အဘိုးအဘှား၊ ဆှမြေိုးတှကေို ရှာထဲက လူတှေ က ဝိုငျးရိုကျ…။ ဘဝတှပေကျြတော့တာပဲ..။
ထောကျလှမျးရေးဆီ ရဲတှကေ ပို့လိုကျတဲ့ အစီရငျခံစာ ရောကျလာ တယျ..။ အိုခုနိရှိက ကိုယျ့အသိစိတျ နဲ့ကိုယျတိုငျ လာပွီး ဝနျခံတာ တဲ့…။ သကျသကေရော..? သကျသကေတော့ ရရေရောရာ သိပျမ ရှိဘူးတဲ့။
ထူးခွားတာက ရှာသားတှေ ဟာ လိုတာ ထကျပိုပွီး ဒေါသကွီးနကွေတယျ..။ အိုခုနိရှိ ကို သဒေဏျပေး ဖို့ တောငျးဆိုကွပါလရေော…။ တကယျ့ လူသတျသမားက ရှာသားတှကေို ဆူအောငျလုပျတာ လညျး ပါမှာပေါ့..။
ဒါပမေဲ့ သူတို့ အိုခုနိရှိကို ဒီရာဇဝတျမှု နဲ့ ဆကျစပျတယျ လို့ ပွောရအောငျ ရုပျဝတ်ထု သကျသေ အထောကျအထား ဒါမှမဟုတျ မကျြမွငျသကျသေ တဈခုဆို တဈခုမှမရှိ..။ အတငျးကနေ ကောလာဟလ… ကောလာ ဟလကနေ သတငျးဖွဈလာတဲ့ လုပျကွံ ဇာတျလမျး သကျသကျ…။
အခငျးဖွဈပှားတဲ့နကေ့ ဝိုငျ အဆို့မှာ သှားနဲ့ကိုကျ ထုတျထားတဲ့ သှားရာ တဈရာတော့ ရှိ တယျ..။ အဲဒီတုနျး က DNA test လညျးမပျေါသေးတော့ ဘယျသူ့ သှားရာ ဆိုတာ သခြော မသိနိုငျ..။
အိုခုနိရှိ ဟာ တရားရုံး မှာ “ ကြှနျတျော လူမသတျ ပါဘူး..။ မတရား မလုပျကွပါနဲ့ ခငျဗြာ.. ကွောကျလို့ ဝနျခံ လိုကျတာပါ” လို့ ငိုယိုတောငျးပနျနရှော တယျ…။ ရှာသားတှကေလညျး ဒေါသ တကွီး စှပျစှဲကွပေါ့..။
အိုခုနိရှိ ဟာ အခငျးဖွဈပှား တဲ့နေ့ မတိုငျခငျ ၆ လလောကျတုနျးက မွို့တကျပွီးတော့ ပိုးသတျဆေးဝယျတယျ….။ အဲဒီပိုးသတျဆေးနဲ့ဝိုငျထဲကပိုးသတျဆေးနဲ့တူတူပဲဆိုပွီးတော့ သကျသပွေတယျ။ ဒါပမေဲ့ အိုခုနိရှိက အဆိပျခတျတယျ ဆိုတာ သကျသေ အထောကျအထား မရှိတာကွောငျ့ အိုခုနိရှိဘကျ က ရှနေ့နေိုငျ တယျ…။ ဝိုငျပုလငျး ဆို့ပျေါက သှားရာကို ပညာရှငျ ၆ ယောကျကိုဆုံးဖွတျခိုငျး တာ အိုခုနိရှိ ရဲ့သှားရာလို့ ထောကျခံ သူက ၃ ယောကျ…။ အိုခုနိရှိရဲ့သှားရာ မဟုတျဘူးလို့ငွငျး သူက ၃ ယောကျ…။
၁၉၆၄ ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလ…။ ပထမဦးဆုံး တရားရုံး က “အပွဈ မရှိ တရားသေ” လို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတ ယျ…။ အိုခုနိရှိ ပြျောနခေဲ့သေး တယျ…။ ဒီလို အဖွကေိုရ ဖို့ အိုခုနိရှိရှနေ့ကွေီးက ကွိုးစား ရတာ ၄ နှဈနီးပါး..။
ရှာသားတှေ က လူသတျကောငျရှာမတှရေ့ငျ ရဲတှေ ရှာထဲကိုထပျလာ၊ ဇာတျလမျးရှညျပွီး ရှာနာမညျပကျြ မှာ ကွောကျတယျ..။ ရဲတှကေ အိုခုနိရှိ ကို နှိပျစကျပွီး အတငျးအကပျြ ဝနျခံခိုငျးတာကို ပွဿနာတကျ မှာကွောကျ တယျ..။ ထောကျလှမျးရေးဘကျ ကလညျး ဒါ ရဲတှေ နှိပျစကျပွီး အတငျးဝနျခံ ခိုငျးခဲ့တာ ရိပျမိနပွေီ..။ ဒါပမေဲ့ စပွီးသား အလုပျမို့ သူတို့ ရဲ့ အမှား ကို ဂပြနျပွညျသူတှေ ရှမှေ့ာ ဝနျမခံခငျြ..။ ဒါကွောငျ့ အိုခုနိရှိ တရားခံ မဟုတျရငျ တရားခံဘယျသူလဲ ဆိုတာ သူတို့အားလုံး မတှေးခငျြကွ…။ သူတို့ အားလုံးဟာ အိုခုနိရှိ ကိုသာတရားခံ လို့ အတညျပွုဖို့ ကွိုးစားကွတော့တာပဲ..။
ထောကျလှမျးရေးတှကေ သကျသေ ထပျရှာပွီးတော့ အမှုထပျဖှငျ့ တယျ။
အိုခုနိရှိ ထောငျထဲကနေ အမှုကို ဆကျပွီး ရငျဆိုငျရတယျ..။ အဲဒီလို အိုခုနိရှိ ထောငျထဲနရေတဲ့ အခြိနျ ကနျြခဲ့တဲ့မိသားစုက ရှာမှာ အနှိမျခံ၊ အပယျခံရတာ.. ရစရာကိုမရှိ…။ နောကျဆုံး ရိုကျနှကျပွီး အိုခုနိရှိ မိသားစု ဆှမြေိုးတှေ အကုနျလုံးကို ရှာထဲက မောငျးထုတျ လိုကျကွတယျ..။
Nabari မွို့ မှာ အထကျတနျးကြောငျးသှား တကျနတေဲ့ သူ့သားလညျး လူသတျသမား ရဲ့သားဆိုပွီး ကြောငျးမှာ အရိုကျခံရ၊ ကြောငျးအထုတျခံရ…။
“မတရားဘူး.. သူ တို့ ကြှနျတေျာ့ ကလေးတှေ နဲ့ ကြှနျတေျာ့ကို ခှဲပဈလိုကျကွတာ “ အိုခုနိရှိဟာ ရှာသားတှေ ကို အလှနျစိတျနာသှားတယျ..။
“ကြှနျတေျာ့ ကလေးတှအေ တှကျ ကြှနျတျော လုပျပေးနိုငျတာ တဈခုတညျး ရှိတယျ.. ကြှနျတျော အပွဈမရှိတာ သကျသပွေဖို့ပဲ…။ ရှာသားတှေ ရဲ့ မတရားမှု၊ ဂပြနျနိုငျငံရဲ့ မတရားမှုကို တဈနနေ့ေ့ တဈကမ်ဘာလုံးက သိစရေမယျ ဆိုတာပဲ..”
အမှုက နောကျထပျ ၄ နှဈကွာသှားတယျ..။၁၉၆၉ ခုနှဈ၊ စကျတငျဘာလ.. သကျသေ အသဈ ဆို ဘာမှမရှိ…။ ပထမ တရားရုံးတုနျးက အိုခုနိရှိ ရဲ့သှားရာလို့ ထောကျခံသူ ၃ ယောကျထဲက တဈယောကျက ဂပြနျနိုငျငံက နာမညျကွီး ပါမောက်ခဖွဈတယျ..။ သူတငျပွတာ ဖွဈနိုငျခြေ ရှိတယျ ဆိုပွီး တရားသူကွီးက ထောကျလှမျးရေး ဘကျက အနိုငျပေးလိုကျတယျ…။
၁၉၆၉ ခုနှဈ.. နောကျထပျ တရားခှငျ မှာ လယျသမား အိုခုနိရှိ “ သဒေဏျ”….။ အိုခုနိရှိ အသကျ ၃၅ နှဈ..။ ဂပြနျနိုငျငံရဲ့ အလှနျ ဝေးလံခေါငျသီသောတောငျတနျးတှကွေား က အရပျမွငျ့မွငျ့ ရုပျခြောခြော … Kuzuo ရှာသားလေးတဈယောကျ ရဲ့ ရငျနငျ့ဖှယျဖွဈရပျပေါ့..။
အိုခုနိရှိဟာ Nabari ဘူတာရုံ မှာ ၁၉၄၂ ကစပွီး အလုပျလု ပျခဲ့တယျ …..။ ၁၉၄၄ မှ ၁၉၄၅ ဒုတိယကမ်ဘာစဈ အတှငျး မှာတော့ စဈသားဝငျ လုပျခဲ့သေးတယျ…။
ဒုတိယကမ်ဘာစဈအပွီး ၁၉၄၇ ခုနှဈမှာ Chieko ဆိုတဲ့ Nabari ဘူတာရုံမှာ အလုပျ အတူတူလုပျတဲ့ အမြိုးသမီး နဲ့ အိမျထောငျကပြွီး သားတဈယောကျ ၊ သမီးတဈယောကျ ရခဲ့တယျ..။ အဲဒီနောကျပိုငျး အိုခုနိရှိဟာ လယျသမား အလုပျလုပျပွီး မိသားစုနဲ့ ပြျောပြျောရှငျရှငျနနေတေဲ့ သာမနျ အညတရ တဈယောကျ..။ မိနျးမ ရှိလကျြသားနဲ့ အခွားမိနျးမနဲ့ မရှုပျမရှငျးဖွဈနခေဲ့တာတော့ အမှနျပဲလို့ သူ ဝနျခံ ခဲ့တယျ..။
၁၉၇၂ မှာ အိုခုနိရှိ သဒေဏျဆိုတာ အမွငျ့ဆုံး တရားရုံး က အတညျပွု လိုကျတယျ..။ အိုခုနိရှိက ၄ ကွိမျဆကျတိုကျ ထပျပွီး အယူခံဆကျဝငျတယျ…။ တရားရုံးက အမွဲပယျခတြယျ..။
၁၉၇၃ ခုနှဈ.. အိုခုနိရှိ အဲဒီလို မတရားသဖွငျ့ အနိုငျကြ ငျ့တာ ခံနေ ရတာမို့ Japan Federation of Bar Associations (JFBA) က ‘Nabari Case Committee’ ကိုဖှဲ့စညျးခဲ့တာပေါ့..။ အိုခုနိရှိ ရဲ့ ၅ ကွိမျမွောကျ အယူခံဝငျဖို့ ကူညီပေးကွ တယျ..။ တရားရုံး က ထပျပွီး ပယျခတြယျ..။
၁၉၉၇ ခုနှဈ.. Professor Habu က လူတဈယောကျ ဝိုငျပုလငျးဆို့ကို ပါးစပျနဲ့ ၃ ကွိမျ ကိုကျဖှငျ့စပွေီး အဲဒီလို ကိုကျဖှငျ့တဲ့ သှားရာတှဟော အခွအေနေ အမြိုးမြိုးကို မူတညျပွီး မတူညီနိုငျဘူး ဆိုတာ သကျသပွေ တယျ..။ ဒါကွောငျ့ အိုခုနိရှိ ရဲ့ သှားရာ ဆိုတဲ့ သကျသေ ဟာ ခိုငျလုံမှု မရှိလို့ အိုခုနိရှိရဲ့ အမှုကို အယူခံ ထပျဝငျတယျ..။ ဒါ ၆ ကွိမျမွောကျပေါ့..။ တရားရုံးက ပယျခပြွနျ တယျ..။
၂၀၀၅ ခုနှဈ.. သိပ်ပံပညာတှေ တိုးတကျလာ တယျ..။ စမျးသပျခကျြတှေ အရ အမြိုးသမီးတှသေောကျ ခဲ့တဲ့ စပဈြဝိုငျထဲက ပိုးသတျဆေး နဲ့ အိုခုနိရှိ ဝယျခဲ့တဲ့ ပိုးသတျဆေးဟာ လုံးဝမတူဘူး ဆိုတဲ့ အဖွထှေကျလာတယျ..။ နောကျတဈခုက အိုခုနိရှိ ဝယျတဲ့ ပိုးသတျဆေးက အနီရောငျ နဲ့ အဖွူအနှဈရောငျ နှဈမြိုးပဲရှိတယျ…။ ဝိုငျအကွညျထဲကို ထညျ့ရငျ အသိသာကွီး..။ ဒါကို ပထမတရားရုံးတုနျးက ဘယျသူမှ သတိမထားမိခဲ့ကွ…။ အိုခုနိရှိက ဝမျးသာအားရ ၇ ကွိမျမွောကျ အယူခံဝငျပွနျ တယျ..။ ဒီတဈခါတော့ ဂပြနျ တရားစီရငျရေးအဖှဲ့က တရားပွနျစီရငျပေးမယျလို့ အမိနျ့ခလြိုကျ တယျ..။ အသကျ ၈၀ နီးပါး အဘိုးကွီး အိုခုနိရှိ အလှနျ ဝမျးသာသှားတယျ…။
ဒါပမေဲ့ ၂၀၀၆ ခုနှဈမှာ ထောကျလှမျးရေးတှဘေကျ က အဲဒီအမိနျ့ ကို ပွနျရုပျသိမျး ဖို့ စာတငျပွနျတယျ..။ နောကျဆုံးအခြိနျအထိ အမှားကို ဝနျမခံတဲ့သူတှေ..။ သိပျကွောကျဖို့ကောငျး ခဲ့တယျ..။
ကြောထောကျနောကျခံ မရှိတဲ့ အမှနျတရားဟာ မာနကွီး ပညာတတျသူတှေ ရဲ့ လှညျ့ကှကျမှာ အလူးအလဲပေါ့..။
“အမှုပွနျစဈဖို့ အတှကျ ထောငျထဲကနေ ရှာက အခငျးဖွဈတဲ့နရော သှားရတယျ..။ ရှာထဲကို ဝငျလိုကျတိုငျး ကြှနျတေျာ့ရဲ့သားနဲ့ သမီးလေးက“ အဖရေေ..”လို့အျောပွီးတော့ အျောငိုလိုကျတဲ့အသံ ကို ကြှနျတျောအမွဲကွားနေ မိတယျဗြာ..!”
ဒီလိုနဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှဈ မလေ ကိုရောကျလာတယျ..။ “The Center on Wrongful Convictions at Northwestern University School of Law” ဆိုတဲ့ အမရေိကနျ U.S. Law School Clinic တရားဝငျအဖှဲ့အစညျးက အိုခုနိရှိ အမှုကို ပွနျလညျစဈဆေး ဖို့ ကူညီငွငျးခုံပေးတော့ အိုခုနိရှိ အသကျ ၈၁ နှဈရှိနပွေီ..။
အိုခုနိရှိကို သဒေဏျခလြိုကျတဲ့ တရားရုံးရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြ ဟာ မှားယှငျး တဲ့ ဝနျခံခကျြတှေ နဲ့ မှားယှငျးစှာနားလညျမှုအပျေါ အခွခေံထားတာ မို့ အမှုပွနျဖှငျ့ပေးဖို့ ဂပြနျဗဟိုတရားရုံးခြုပျကို တောငျးဆို လိုကျတယျ..။ ဒါကို ဂပြနျပွညျ က စဉျးစားမယျ ဆိုပွီးပွော ဆိုခဲ့တယျ..။
အိုခုနိရှိ တဈယောကျ အားတကျရပွနျ တယျ…။ အိုခုနိရှိ ရှနေ့ကေ ကူညီပွီး အမှု ဟိုးအစကနေ အဆုံးအထိ အသဈပွနျရေးပွီး ပွနျလြှောကျတယျ…။
ဒီနအေ့ထိ တငျထားဆဲဖွ ဈတယျ..။
၂၀၁၀ မှာ အိုခုနိရှိ ရဲ့ သားက ရောဂါနဲ့ ကှယျလှနျ ခဲ့တယျ..။ အိုခုနိရှိဟာ မိသားစုနဲ့ အတူပွနျနဖေို့ မြှျောလငျ့ထားသမြှ သားက သူ့ ကို အရငျခှဲခှာသှားလပွေီ..။
UN Human Rights Committee က အိုခုနိရှိ ကို ကူညီခဲ့ကွပမေဲ့ မာနကွီး တဲ့ ဂပြနျနိုငျငံက ထောကျလှမျးရေးတှဟော ဂပြနျနိုငျငံ တရားစီရငျရေးဘကျ မှာ ဩဇာညောငျးလှနျးလှတယျ..။
The Asian Human Rights Commission (AHRC) အာရှလူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျကလညျး အသကျ (၈၁) နှဈရှိပွီဖွဈတဲ့ အိုခုနိရှိ နဲ့ပတျသကျသောသတငျးအခကျြအလကျတှကေို စုဆောငျးပွီး အမှုပွနျဖှငျ့ဖို့ ကူညီခဲ့တယျ။
ဘယျ အခြိနျ၊ ဘယျနေ့ တံခါးလာခေါကျပွီး လြှပျစဈခုံပျေါ ထိုငျရမလဲဆိုတဲ့ အတှေး နဲ့ အိုခုနိရှိဟာ တဈယောကျခနျးထောငျထဲ မှာ ကွောကျလနျ့ပွီး နှဈပေါငျးမြားစှာ ..။ နတေို့ငျးဟာ သူ့ရဲ့ နောကျဆုံးနဖွေ့ဈလာနိုငျ တယျလေ…။ ဂပြနျနိုငျငံ မှာ သဒေဏျခမြှတျခံရတဲ့သူတှေ ဟာ သူတို့ သရေမယျ့ အခြိနျကို နာရီပိုငျးလောကျ ပဲ ကွိုသိ ရတာလေ..။
အယူခံလေး ဝငျပွီး မြှျောလငျ့ခကျြရှိလာလိုကျ… ထောကျလှမျးရေးဘကျက ပယျခလြိုကျ… ဘဝမှာ ရှငျလိုကျ၊ သလေိုကျ ဖွဈခဲ့ရတာ အကွိမျကွီမျ…။ ဒါနဲ့ပဲ ၂၀၁၅ ခုနှဈ အောကျတိုဘာလ၊ အိုခုနိရှိ ဟာ ထောငျထဲ မှာပဲ နမိုးနီးယား နဲ့ သေ ခဲ့ရတယျ..။ အိုခုနိရှိ အသကျ ၈၉ နှဈအရှယျ..။ မသခေငျအထိ သူပွောခဲ့တဲ့ စကားက “ ကြှနျတျော လူမသတျပါဘူး..။ မတရားမလုပျကွပါနဲ့ ခငျဗြာ..” တဲ့
အိုခုနိရှိ ရဲ့ အမှုဟာ ဂပြနျ ရာဇဝတျမှု တရားစီရငျရေးစနဈ ရဲ့ တလှဲမာန ကိုပွတယျ…။ အိုခုနိရှိ နဲ့ပတျသကျပွီး ဂပြနျနိုငျငံရေး တရားစီရငျမှုဟာ ကမ်ဘာက သိအောငျ မကျြနှာပကျြခဲ့ရတာပေါ့…။ ဒီနအေ့ထိ ဂပြနျပွညျသူတှေ ကွား မှာ အကွီးမားဆုံး အငွငျးပှားစရာ ပဋိပက်ခ တဈခု အဖွဈရှိနဆေဲ..။
ဂပြနျပွဈမှုဆိုငျရာကငျြ့ထုံး ဥပဒေ ပုဒျမ ၃၃၆ မှာ.. “ အပွဈကငျးစငျ သညျဟု ယူဆရခွငျး ဥပဒသေ ” ကိုပွဌာနျးထားပမေဲ့ စာအုပျထဲမှာပဲ ရှိခဲ့တယျ..။ အဲဒီ ဥပဒမှော “ တရားခံတဈဦးသညျ မှုခငျးဆိုငျရာ အခကျြ အလကျ ရှာဖှတှေရှေိ့မှု ၌ အမှားအယှငျးတ ဈခုခုနှငျ့ ပတျသကျလြှငျ အယူခံဝငျခှငျ့ ရှိသညျ။” တဲ့..။
လကျတှေ့ မှာတော့ ဂပြနျနိုငျငံ ရဲ့ ဩဇာအာဏာရှိပွီး မာနကွီး တဲ့ ထောကျလှမျးရေးတှဟော စကား ကို ပွနျပွငျပွောဖို့ ဆိုတာ လုံးဝမဖွဈနိုငျသလောကျ..။
ထောငျထဲ မှာ အသကျသသှေားရရှာ တဲ့ အိုခုနိရှိ ဟာ အပွဈမရှိသူ တဈယောကျဆိုတာ ကို သကျသပွေဖို့ အိုခုနိ ရှိရဲ့ သမီး နဲ့ မွေး မွဈတှကေ ဆကျလကျ တိုကျပှဲဝငျနဆေဲဖွဈ ပါတယျ..။
တဈနနေ့ေ့ မှာ အမှနျတရားကို ပွသခှငျ့ရမယျ လို့ ယုံကွညျမှု အပွညျ့ နဲ့ပေါ့..။
မြေကြီး က ရွှေသီးတယ် ဆိုတဲ့ စကား အတိုင်း တကယ့် ရွှေအစစ်တွေ ထွက်တဲ့ သစ်ပင်
မထင်မှတ်ထားလောက်အောင် ရက်စက်ကြတဲ့ ” သူတို့ မိဘတွေ ရဲ့ နောက်ဆုံး အချိန် ” ..ဂျပန်နိုင်ငံက ဖြစ်ရပ်များ
ကုဋေ ပြီးရင် ဘာလာလဲ …? ( မြန်မာ့ဂဏန်းသင်္ချာ မှာ ကုဋေ ပြီးရင် ဘာလာလဲ မသိသေးသူများ အတွက်)